Chii chekudya muBari | Absolut Kufamba
maruuzen | | Updated on 15/04/2021 11:42 | Italia
Imwe yeakakurumbira kicheni pasirese ndeyeItaly, saka parwendo hazvibviri kusawedzera mashoma kilos. Kuenda kumaodzanyemba tinosangana nerimwe remaguta anozivikanwa uye ekushanya, Bari, saka nhasi tichadzidza nezvazvo chekudya muBari.
Ichokwadi ndechekuti chikafu cheItaly chakagamuchira uye chichiri kugashira simba rekicheni revavakidzani vemuganhu, saka kunyangwe kuchamhembe kune imwe chikafu cheFrance, nechokumaodzanyemba ndiro dzakanyanya Mediterranean, nehove, maorivhi uye madomasi. Saka, nyora pasi ruzivo urwu kuti unakirwe nekudya muBari.
1 Bari chikafu
2 Yakabikwa pasita
3 Hove Mbishi
4 chingwa chakatsetseka
7 Mbatatisi, mupunga uye mussels
10 Horse chop
Bari iguta rinozivikanwa reItari, iri pakati peNaples nePalermo, pamhenderekedzo yevakanaka Adriatic gungwa. Ine dzimba dzekare, nhaka yevaRoma, dzimba dzamambo nedzimba dzemitambo, saka hupenyu hwetsika hunonakidza sewe gastronomic.
Mhenderekedzo yeMediterranean ndiyo inopa zvinyorwa zvekudya kwayo, kureva. hove zvakasiyana, octopuses nguva dzose yakachena, Urchin yegungwa uye inonaka mussels. Kune hove nehozhwa dzinodyiwa mbishi, asi kune dzimwewo dzinodyiwa dzakabikwa. Muboka iri rekupedzisira pinda lobster, clams uye prawns. Chinonyanya kushandisirwa ipasta yakavhenganiswa nemuriwo wemuno uye sauces dzakarungwa zvakanaka.
Idzo nyika dzakatenderedza Bari dzinozivikanwa nehunhu hwadzo mafuta omuorivhi, asi zvakare ne garlic, the miriwo mitsva, the cilantro, all chicory, aubergines, yakafara bhinzi uye nhokwe. Zvese pamwechete zvakasanganiswa, semuenzaniso, mune inozivikanwa sipo yeminesi.
Asi tichiziva izvi zvekutanga zvigadzirwa, ngatitaurei izvozvi nezve izvo zvinonyanya kuzivikanwa ndiro dzeBari, kuti titange kuisa pamwechete rondedzero ye chekudya muBari.
Es pasta yakabikwa. Yaimbove yakagadzirirwa kutanga kweLent, ine nyama yenguruve nemazai kana seSvondo dhishi, asi nhasi inogona kudyiwa chero nguva yevhiki uye inogara iri pane yekudyira menyu.
Kana iri pasita mune zvese, muBari pasita inogadzirwa nenzira yakapusa, ine mvura, hupfu uye munyu, uye iri pazasi pemidziyo yakawanda. A classic ndeye orecchiette, ayo akaumbwa neruoko, kana iyo cavatelli uye fricelli iyo inogadzirwa kuti itore muto mushe, inogara ichigadzirwa kubva mumiriwo, nyama kana hove.
Pamusoro takataura izvozvo gungwa reMediterranean rinopa hove uye hove dzechikafu kune chikafu cheBari, uye dzimwe nguva idzi dzinodyiwa dzakabikwa uye dzimwe nguva dziri mbishi. Hove mbishi hachisi chigadzirwa chevaJapan uye pano vanhu vanozvitora sechinhu chinonaka zvakare. Inodyiwa seinotapira kana sechikafu chinokurumidza yakatengwa zvakananga kubva kumubati wehove.
Hove, asiwo octopus, clams, lobster ... uye hongu, isina muto wemonimu, saka unofanirwa kufarira kunakirwa kwakasimba kwegungwa, pasina firita.
Pano focaccia haisi yekudya mumugwagwa chete, chinenge chiitiko chechitendero, vanodaro. Idya iyi inosanganisa iyo upfu, mvura, munyu, mafuta uye mbiriso, uye madomasi, maorivhi, mahebhu uye dzimwe nguva mbatatisi inowedzerwa. Iyo vhezheni ine mbatata tsvuku inovharirana semadomasi matsva inonaka.
Inotarisa inogona kuva ndiro huru kana kungodya, asi iwe uchaiwana mune ese mashops ezvitoro muguta. Yakanakisa yemhando yepamusoro ndiyo Fiore Bakery, iri mune imwe nhandare yakanaka nhanho shomanana kubva kuChechi yeSan Nicola uye Cathedral yeSan Sabino.
Iyo inhengo chaiyo yechinyakare yeBari iyo iripo mumakicheni eses. Ndiri kutaura nezve sgagliozze, chibage cheupfu, Kubikwa Kwechibage, iyo inopihwa chimiro chekwere, inotemwa muzvidimbu uye yakanyudzwa mumafuta anopisa. Mhedzisiro yacho ine munyu, goridhe uye unonaka kwazvo mukanyiwa uyo unonyanya kudyiwa nevanhu vemuno.
Mumwe wevanonyanya kufarirwa sgagliozze vanobika muBari ndiMaria de Sgagliozze. Nhasi anofanira kunge ave nemakore anopfuura makumi mapfumbamwe ekuberekwa, kana achiri mupenyu, asi anowanzobika pasuo rake ozvitengesa pakati pe90 kusvika 1 euros. Ndiye ngano inorarama muzvinhu zve chikafu chemumugwagwa muBari.
Iyo yakasarudzika yekugamuchira shamwari chero nguva yegore. Maererano netsika kutsanangurwa kwayo kunoreva kuti mhuri yese inobatanidzwa, kutenderedza tafura, zvese pamwechete zvichigadzira mukanyiwa. Mushure meiyo misa yakazadzwa ne mozzarella nematomatisi, padyo uye furaya.
MuBari mune misiyano yakawanda yeiyi yakasarudzika, asi imwe yeanonyanya kufarirwa ndeye yakakanyiwa nenyama kana nabU.S. chikafu Ino inzvimbo yakanaka yekutenga yakanaka panzerottis uye nekuidya paunenge uchifamba nepakati pemadziro ekare, iyo Muraglia.
Mbatatisi, mupunga uye mussels
Iyo chaiyo yakasarudzika kosi yekutanga kubva kuBari cuisine. Mu zvigadzirwa zvepasi uye gungwa zvakanyatsobatanidzwa. Ndezvipi zviyero zviripo zvechigadzirwa chimwe nechimwe? Hapana munhu anogona kutaura zvechokwadi uye zviri muziso uye neruzivo rwemubiki, ipapo chete ndipo panowanikwa chiyero, chiyero chakakwana.
Zviripachena, ndivo vanambuya kana vanamai vane iwo mashiripiti wand mumhuri yega yega.
Isu tinoitumidza zita kupfuura kana isu tichitaura nezve pasta muBari. Iyo ndiyo yakasarudzika pasita muBari uye zvinonzi inonzi saka nekuti inoyeuchidza nenzeve diki. Around apa vanomudaidzawo strascenate, izwi rinoenderana nekugadzirwa kwaro: nebanga mukanyiwa unoparadzaniswa kuita zvidimbu zvidimbu uye zvobva zvabatanidzwa nemusoro wetipipi, unonaka kwazvo.
Unogona kuidya kupi? Kwese kupi, asi semuenzaniso, pamberi paCastello Svevo, mutaundi rekare reBari, iwe uchaona mugwagwa une vakadzi vakuru vazhinji vanotengesa orecchiettes. Uchakwanisa kuona kuti vanozvigadzira sei panguva ino uye vanokugadzirira dhishi racho vasingazeze. Zviripachena, tora kufamba usati watenga. Mutengo unosiyana zvichienderana nemhando dzezviyo, asi verenga pakati pe5 ne8 euros.
Dhizeti yekutanga pane yedu runyorwa. Zviri nezve postra yakagadzirwa nefilo hlama, yakazadzwa nekirimu uye yakafukidzwa neshuga yechando. Yakanyanya kutapira.
Pamazororo kana maSvondo zvakajairika kuungana pamwe chete kwemasikati uye dhishi iro rinogara richioneka patafura ndiro rekucheka bhiza, chaizvo wepakati kusvika muhombe nyama mipumburu, yakarungwa mu ragout, yakazara caciocavallo chizi uye nyama yenguruve ruomba.
Ndicho zvakanaka zvakajairwa chikafu chemumugwagwa uye zvinonaka. Inodanwawo pettole Uye inogadzirirwa zuva rega rega nevakadzi vemba pamakona emigwagwa mikuru yeOld Town yeBari. MuPiazza Mercantile iwe unowana zvimwe zveakanakisa.
Iyo popizze inoenda pamwe chete nesgaliozze, isina polenta.
Hatigone kukanganwa yekare yeItaly ine vhezheni yayo yehunyanzvi muBari. Iyo inonaka vhezheni ndiyo brioche yakazadzwa ne ice cream uye nzvimbo yakanaka yekuyedza iGelateria Yemamwe Marudzi, nematafura ayo mumugwagwa nenzvimbo yayo huru muCastello Normanno - Sevevo, ine kupenya kweByzantine.
Pakupedzisira, sezvaungave wakaziva, kune zvakawanda zvekudya mumugwagwa kuti iwe unogona kudya kungogara muplaza kana pabhenji kunze kwebhizinesi. Bari akadaro. Ehe unogona kuenda kumaresitorendi nemabhawa (nzvimbo dzekudyira dzemhuri uye mabhawa kazhinji anogamuchira chete mari, saka chengeta izvozvo mupfungwa), asi kana paine chimwe chinhu chakakurudzirwa kwazvo muguta rino reItari, zviri chaizvo famba, famba, urasike mumigwagwa yayo uchitevera hwema uye kuravira zvinonaka.
Ndiko kuti kuseri kwemusuwo wega kana hwindo kana mumakoto, makicheni anogara akabatikana akavanzwa. Mangwanani nemambakwedza iwe uchaona vanhu vachikurukura, vachirembera, uye izvo zvakanaka.
Yakazara nzira kuchinyorwa: Absolut Kufamba » Chii chekudya muBari
Iwe unofarira kudhizaina? kutsvoda